"Indlu ka-Jenny" # 2, # Yeongil Beach # KTX Station # Indawo yokuhlala engokomzwelo # Netflix iyatholakala - I-Airbnb
"Indlu ka-Jenny" # 2, # Yeongil Beach # KTX Station # Indawo yokuhlala engokomzwelo # Netflix iyatholakala
Jangnyang-dong, Buk-gu, Pohang, North Gyeongsang Province, i-South Korea
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Yuri
U-Yuri Ungumbungazi ovelele
Sawubona, ngingu-Jenny, umbungazi wakho.
Siyabonga ngokuvakashela i- "Jenny House", eseduze ne-Yeongil National Beach enhle,
Indawo yethu yokuhlala ayisebenzisi inkampani, futhi umbungazi usingatha konke kusuka ekuhlanzeni kuya kuyo yonke imininingwane.
Kuwusuku olumatasa e-Pohang, indawo ehamba phambili yokuvakasha ogwini olusempumalanga, kodwa kungani ungathathi ikhefu nomuntu omthandayo?
Sithemba ukuthi zonke izivakashi ezivakashela i-Jenny House zizokwenza izinkumbulo ezinhle futhi zibe
nezinkumbulo ezinhle uhambo lokuphila e-Pohang. *^^*
# Ikamelo olibukayo njengamanje lisesitezi sesibili.
* I-WiFi Yekamelo,
i-TV eyisicaba engu-40-inch, umbhede ophindwe kabili, i-duvet, i-pad, umcamelo, i-air conditioner, usofa, itafula lokudlela, isihlalo, isibuko eside, itafula eliseceleni kombhede, ukukhanya okuma, i-hanganger (ithawula), itafula lokugoqa
* Isiqandisini sekhishi (kuhlanganise namanzi amancane), umshini wokuwasha, i-microwave uhhavini, i-induction, i-dry rack, ibhodwe lekhofi (ikhofi, ubisi), umgqomo wokudla, ingilazi yewayini, into yokuvula iwayini, inkomishi yamanzi, ingilazi ye-soju, izitsha ezingu-2 ezisethiwe, ibhodwe, ipani lokuthosa, isipuni, izinkezo, insipho yetiye elide, ummese, i-ladle, isibani sokuguqula, izitsha ezihlukahlukene zokupheka, ummese, ibhodi lokusika, ama-scissors, ibhodwe, ibhodwe, isipontshi esilahlwayo, amagilavu okugilavu, insipho yasekhishini, ithawula lasekhishini,
insipho yokuwasha, i-softener
* Imikhiqizo alahlwayo yasegumbini lokugezela
(isixubho, umuthi wokuxubha amazinyo, insipho, umshini wokuhlanza igwebu), iphepha lasendlini yangasese, i-shampoo, ukugeza umzimba, ukugeza izandla, umshini wokomisa izinwele
# Ezinye izinto okufanele
uziqaphele * Ukupholisa (May - September)
- Sicela ungavuli amafasitela bese uvula i-air conditioner.
- Qiniseka ukuthi uvala i-air conditioner lapho uphuma noma uhlola
ngaphandle * Ukushisisa (ngo-October kuya ku-April)
- Ifudunyezwa ngokuzenzakalelayo kuma-degree angu-26 amahora angu-24.
-Uma unanoma yimaphi ama-anomalies okushisa, sicela uxhumane nathi.
* Amanzi ashisayo (nsuku zonke)
- Ibekwa ngokuzenzakalelayo kuma-degree angu-45 amahora angu-24 ngosuku.
- Kuthatha cishe imizuzwana engu-20 ukuba amanzi ashisayo aphume.
Qaphela - Isakhiwo sonke asikubhemi.
- Inani lezivakashi alikwazi ukweqa 2.
Kunezindawo eziningi ezitholakala kalula (izitolo ezilula, ama-marts amakhulu, izindawo zokudlela) eduze futhi kuthulile.
Kunesitobhi sebhasi phakathi nohambo lweminithi elingu-1, futhi ungakwazi ukuhamba ngezinyawo noma uhambe ngezinyawo uye e-Yeongildae Beach, noma imizuzu emi-5 ngemoto. I-Yeongildae Beach, indawo eheha izivakashi e-Pohang, inezindawo zokudlela eziningi, ngakho-ke sicela ujabulele ukudla okumnandi.
Ungasithinta cishe nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwamahora okulala (pm11:00~am8:00). Ngizokunikeza impendulo enomusa ^^
UYuri Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Jangnyang-dong, Buk-gu, Pohang namaphethelo